Agha vidiyo nani
Agha vidiyo nani 3 afọ 3 ọnwa gara aga #433
Daalụ natara: 19
Ndeewo Gentelmen ,, nwere a oche!
M ga-eji nke a ISIOKWU Forum n'ihi agha vidiyo were naanị ...
Ekele na-asọpụrụ na!
Agha vidiyo nani 3 afọ 3 ọnwa gara aga #434
Ezi Day Gentelmen ,,
Ka na-amalite na ezi mmadụ Name Dave Groark ...
Dave Groark na-enye anyị ihe ọmụma zuru ezu walkaround nke Lockheed F-104 Starfighter. Dave na-amasị ọtụtụ akụkọ banyere ya na ndị enyi na-efe efe na F-104 na ahụmahụ ha. A e filmed na Historic Aviation Memorial Museum na Tyler Texas.
Nwere ụfọdụ nkwanye ùgwù na-enwe a oche na-eso ihe nwoke a na-ekwu &-agwa gị banyere ...
N'azụ Mpaghara Mgbe F -104 Walkaround Video Gbaanụ
Oh ,, mee ka ị na-na na niile ezigbo ụmụ nwoke na ebe a ,, M nwetara gị a obere ego ,, maka ùgwù i nyere Military VETs.
Gaba n'ihu !
"On December 10, 1963, mgbe anwale ihe NF-104A rọketi-kwadokwara ọkpụkpọ òkù aerospace ọzụzụ, o alagbụrụkwaara ọnwụ mgbe ya ugbo elu wee si akara na 108,700 ụkwụ (fọrọ nke nta 21 kilomita ruo) na jiri. Ọ parachuted nchekwa na 8,500 ụkwụ mgbe vainly-alụ iji nweta akara nke dighi ike, ngwa ngwa na-ada craft. Na ihe a merenụ ọ ghọrọ onye mbụ pilot iji mee ka ihe mberede ejection na zuru mgbali uwe dị mkpa maka elu elu flights. "
Na ụgbọ elu e bibiri na ndị dị n'ihu okuku. Ihe nchoputa mgbe e mesịrị gosiri na ihe kpatara nke okuku bụ a atụ ogho ndị ihe oké n'akuku nke agha na enweghị ugbo elu omume. The oké n'akuku nke agha e mere site pilot input ma site a gyroscopic ọnọdụ eguzobe ndị J79 engine spooling mgbe mechie maka rọketi-kwadoro mbugharị ọrịrị na-adọ.
The okuku a kọwara na nkiri "The Right Stuff." Otú ọ dị, director / so dee gbanwere ọtụtụ ihe ndị a nụrụ / ihe omume ndị metụtara okuku. Banyere naanị ihe ha ọkọdọ nri bụ na ihe F-104 mere okuku na ọ piloted site Yeager.
The stunt nwoke akpọ Yeager na fim n'iyi. On Friday, January 14, 1983, na filming bụ recommence. The zubere awụlikwa elu bụ na-amalite na 10,500 ụkwụ si a Cessna 206, aha dị ka N29173. The igwefoto ọrụ, Randy Deluca, na Svec jumped na-enweghị merenụ, bụ ndị anwụrụ ọkụ generator dara na-arụ ọrụ. Otú ahụ ka ụzọ ẹkenịmde ke ọ bụla ọzọ ruo mgbe ha ruru 3,500 ụkwụ.
Ha kewara ekewa, esoro n'ebe ọ bụla, na iso na-adalata, na Deluca-ekere òkè bụ isi parachute na 2,500 ụkwụ. Svec, bụ onye e ada a ewepụghị na ike ọnọdụ, mgbe gbapụ ma nke ya chutes. Ebe jumped na-enweghị akpaka ebighị ngwaọrụ, ọ impacted ọzara n'ala, na-egbu ndị 35 afọ ozugbo.
Otu nnyocha nke ma Svec akpan na idobere chutes gosiri na nsogbu na-ma, na ndị ji anya ha n'ala hụrụ na ọ dịghị ihe ịrịba ama nke na-alụ ma ọ bụ ihe isi ike na ya. The uwe o yi bụghị karịsịa ike ịgagharị na, ya na e wezụga yi zuru-isi okpu agha, ọ dịghị ihe bụ nke ndị nkịtị. N'ikpeazụ, ọ dịghị nkọwa a hụrụ maka nnwụchu ọnwụ nke vetiran soja nke n'elu 2,000 jumps, ọ bụ ezie na ya n'ọtụtụ ebe chere na anwụrụ ọkụ sụgharịrị ya amaghị ihe ọ bụla na-enweghị ike na-eme.
Chuck Yeager si Test Flight / Crash Na The F-104
Ndumodu ikpe azu: site Colonelwing.
Agha vidiyo nani 3 afọ 3 ọnwa gara aga #435
Ndeewo Gentelmen ,,,
Vietnam Agha Pilot POW Tony Marshall
Lt Kọl Tony Marshall (USAF ret.) Mbak ahụmahụ na-efe efe F-4 phantom fighter-atụ bọmbụ n'elu North Vietnam ruo mgbe ugbo elu gbawara, e weghaara na diri ọdachi ahụ ka a POW.
Agha vidiyo nani 3 afọ 3 ọnwa gara aga #438
The egwu F-4 phantom Gentelmen ,,.
Nke a izi HD video na-egosi otú ndị United States na-eji dị iche iche iche nke na F-4 phantom ugbo elu e ji ofụri South East Asia 1960s-1970s site United States Air Force (USAF). Phantom bụ nnukwu ụgbọelu na a top ọsọ nke n'elu Mach 2.2. Ọ nwere ike na-ebu ihe karịrị 18,000 pound (8,400 n'arọ) na itoolu mpụga hardpoints. The F-4 E jikwa ọtụtụ ebe, jere ozi dị ka ihe bụ isi na ikuku kara ugbo elu ma n'Òtù Ndị Agha Mmiri na USAF, ghọrọ ihe dị mkpa na ala-nkwado na efe n'elu na nyoputa onyeiro ọrụ. Phantom nwere ihe ùgwù nke ịbụ ndị ikpeazụ US ugboelu bubatara bịaruo itu kaadi ọnọdụ na 20th narị afọ. The McDonnell Douglas F-4 phantom II bụ a tandem abụọ-nmehie, ejima-engine, ihe niile na-ihu igwe, ogologo nso supersonic ugboelu interceptor ugbo elu izizi maka ndị United States site McDonnell Aircraft. Ọ bu ụzọ banye ọrụ na 1960 ma gosi na ukwuu kwenyere na, ufodu na site n'etiti afọ ndị 1960s ghọrọ akụkụ bụ isi nke ndị ikuku nku.
Agha vidiyo nani 3 afọ 3 ọnwa gara aga #439
Na ihe niile ùgwù ,, Ndinọ ị Brig. Gen. Robin nọ n'agbata Gentelmen!
Bụ onye Robin nọ n'agbata?
Robin nọ n'agbata
An American dike - Robin nọ n'agbata
Robin nọ n'agbata (July 14, 1922 - June 14, 2007) bụ ihe American fighter pilot na n'ozuzu ojii na US Air Force. Ọ bụ a "Mmaji itu kaadi", na ngụkọta nke ihe 16 mmeri n'Agha Ụwa nke Abụọ na Vietnam Agha. Ọ lara ezumike nká na 1973 dị ka a Brigadier general.
ọ nwa Army Air Forces Isi General Robert nọ n'agbata, gụrụ akwụkwọ na West Point, na ngwaahịa nke zụlitere n'ụzọ ná mmalite afọ nke US Army Air Corps, nọ n'agbata chịkọtara okorobịa na Agha Ụwa nke Abụọ fighter pilot. Ọ nọgidere na-eje ozi dị ka ọ ghọrọ United States Air Force, n'agbanyeghị esiwak ndidi-emegide ya onye ndú, na bụ otu onye nke ọsụ ụzọ ugboelu ụgbọelu. Ebili ka iwu nke abụọ fighter nku, nọ n'agbata Ẹda n'etiti ụgbọelu akụkọ ihe mere eme, na ndị ọgbọ ya, dị ka ndị kasị mma nku-isi usu-Vietnam Agha, n'ihi na ma ya ntụ ọgụ usọ, na ya aha dị ka a ọgụ ndú.
Nọ n'agbata kwadoro ka Brigadier general mgbe laghachiri si Vietnam ma alaghị ọzọ isi n'iwu. The fọdụrụnụ nke ya ọrụ e mefuru na-abụghị arụmọrụ ọnọdụ, dị ka Commandant nke Cadets na United States Air Force Academy na dị ka ihe ukara ke Air Force soja nke General si Office.
Agha Heroes of mbara igwe - Vietnam Ọgụ nkịta Robin nọ n'agbata
Agha vidiyo nani 3 afọ 3 ọnwa gara aga #440
The Aces nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia
United States ugbo elu ground support arụmọrụ ke Southeast Asia, na-akọwa otú ugboelu ụgbọelu achikota iji kpochapụ ihe dị mkpa ala zaa otú ahụ dị ka àkwà mmiri, bunkers na ugbo ala.
Agha vidiyo nani 3 afọ 3 ọnwa gara aga #448
The hog Gentelmen ... enwe!
Obi ụtọ na Brrrt Day Special
Ezì ọhịa GAU-8 BRRRT Strafing Gun Agbakwuru Kwatuenu unmanned Humvees
A-10 ezì ọhịa mgbochi tank ụgbọ elu na-eduzi egwu GAU-8 strafing egbe na-agba na unmanned humvee ugbo ala iji nwalee ha nwere ike ibibi akpụ akpụ na static zaa.